Kuti ikwanise kuve vagari venzvimbo pasi pesarudzo yezvivakwa, hurumende inoda kuti vanyoreri vagadzire mari mune yakasarudzika, inobvumidzwa zviri pamutemo kutengesa zvivakwa nemutengo wakakwana US $ 400,000 pamwe nekubhadhara mari dzehurumende dzekubhadhara uye mubhadharo wakakodzera.
Zviviri (2) zvikumbiro kubva kumapati zvakabatana zvinogona kuita mari yekudyidzana, uye wega wega anokumbira kuisa mari shoma yeUS $ 200,000 kuti akwanise. Zvese zvekugadzirisa uye zvakafanira kushandira mubhadharo zvinoramba zvisina kuchinja.
Pamusoro pezvo, vaviri kana vanopfuura vanyoreri vakaita chibvumirano chekutengesa uye chisungo chekutenga chinogona kukumbira pamwechete kuti vagari venzvimbo nekudyara chero bedzi mumwe munhu achinyorera ape mari shoma yekuUS $ 400,000.
Kubatsira muridzi weimba yezvivakwa kunobvumidzwa kuburikidza nekambani isiri-purofiti chero bedzi kambani yakapa zvese zvayakatenderwa kugovana kune anenge akumbira, yakagadzwa uye iri munzvimbo yakanaka pasi pemitemo yeAntigua neBarbuda, haisi yekubvumirwa. kana sangano rekunze uye rinotumira umboo husingarambidzike kune hwaro hunobatsira, huchapupu uhu huchave hwakasimbiswa neRegistrar yeMakambani.
Sezvo maitiro ekunyorera pasi pesarudzo iyi anosanganisira kutengwa kwezvivakwa, izvi zvinogona kuwedzera nguva yekugadzirisa zvichienderana nepfuma yakasarudzwa. Izvo zvivakwa hazvigone kutengeswazve kudzamara makore mashanu mushure mekutenga, kunze kwekutenga imwe imba yepamutemo yekutengesa imba muAntigua neBarbuda.
Chikumbiro chekuva vagari venzvimbo nekudyara pasi pesarudzo yekutengesa zvivakwa chinogona kuendeswa kuChizvarwa neInstitute Investment Unit (CIU) kana chibvumirano chekutenga nekutengesa chakasainwa pamwe neanogadzira chirongwa chakabvumidzwa, icho chichava pasi pekupihwa kupi chikumbiro chekugara.
Paunotumira chikumbiro chako iwe uchakumbirwa kubhadhara iyo inofanirwa kushandira mubhadharo uye gumi muzana yemutero wehurumende. Paunenge wagamuchira tsamba yekubvumidza iwe uchakumbirwa kubhadhara iyo yese mari yehurumende yekubhadhara uye zvese zviyero nekuda kwemugadziri ari pasi pekutengesa uye chibvumirano chekutenga kuitira kuti zita rikwanise kunyoreswa muzita rako uye bvumidza kuti riitiswe Investment estate maererano nehungamiro hwakagadzwa neC Citizenship ne Investment Unit (CIU).
Kana zvangogashirwa, gwaro rekunyoreswa richapihwa kune wese wekutanga kunyorera uye nhengo dzemhuri yavo izvo zvinoda kuendeswa kuhofisi yepasipoti nekushandisa kwavo uye chero zvinyorwa zvinoenderana nazvo.
Wako wakamiririwa mumiririri / mumiriri achakupa mazano emazuva anowanikwa kune chero;
Shanyira Antigua neBarbuda kuunganidza pasipoti yako uye kutora mhiko kana kusimbiswa kwekuvimbika